Ao amin'ny Zoo miaraka amin'i Bebe sy Dadabe, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ao amin'ny Zoo miaraka amin'i Bebe sy Dadabe, maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Zara raha misy 10 andro mandra-pahatongan'ny kely indrindra amin'ny trano manomboka ny fialantsasatry ny Noely, vanim-potoana izay tsy maintsy hanaovana izany ankafizo ny zanatsika amin'ny fomba rehetra hanandramana hisorohana azy ireo tsy hankaleo amin'izay tafiditra ao. Ny fampiharana izay asehonay anao anio Ao amin'ny zoo miaraka amin'ny renibeny sy raibe, dia hamela ny zanakay hanana fotoana mahafinaritra mandritra ny fianarany mamaha ny piozila, ny fomba famahanana ny biby, ny mihady zavatra ... Fairlady Media, manolotra lalao isan-karazany ho an'ny ankizy kely izay ny raibe sy renibe no mpilalao fototra, lalao mety indrindra ho an'ireo ankizy kely ao an-trano eo anelanelan'ny 2 sy 8 taona.
Amin'ny zoo miaraka amin'ny renibeny sy raibe, dia fampiharana izay Amin'ny teny anglisy izy io, saingy noho ny fanaraha-maso ananany, ny ankizy rehetra dia afaka milalao ary mianatra fiteny hafa tsy misy olana. Ny lohahevitr'ity lalao ity dia mifantoka amin'ny biby, ny fiainana dia, ny toeram-ponenany, ny fitondran-tenany, ny sakafo faran'izay tsara, ny resak'izy ireo ... fa hahafahan'ny ankizy manatsara ny vakiteny, mampihatra matematika, siansa ary taranja ambaratonga voalohany ihany koa.
Hetsika azo alaina ao amin'ny Zoo miaraka amin'ny Bebe sy Dadabe
Amboary ny famantarana
Feo biby. Ny ankizy dia tsy maintsy mamantatra ny feon'ireo biby amin'ny sariny.
Matematika: kajy ny fitsidihana
Tadiavo ny mahasamihafa azy.
Tadiavo ny fôsily
Ampifanaraho amin'ireo biby ireo famantarana. Mety amin'ny fianarana ny anaran'ny biby anglisy.
Fahano ireo penguin
Lokoy ny biby!
Manaova tsakitsaky miaraka amin'i Dadabe!
Mandanjalanja ny baolina tombo-kase ho fampisehoana mahafinaritra!
Misafidiana kilalao vaovao!
En Ao amin'ny zoo miaraka amin'ny abula sy ny raibe, ny zanakay dia hizaha toetra ny tsipelina sy ny fahaizany mamaky, ny fahaizany mamaha ny piozila, ny manao fanampin, ny fitsapana ny fahaiza-mamorona ary koa ny mianatra soatoavina tsara momba ny fiarovana ny natiora. Ity lalao ity Manana vidiny 2,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store izy io, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ao amin'ny Zoo miaraka amin'i Bebe sy Dadabe, maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra
Samsung dia hanafoana ny Galaxy Note 7 izay mijanona ho mavitrika hatrany